ဘာကြောင့် လက်သည်းဝါရသလဲ? ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပျောက်မလဲ?
သံဓာတ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ် မလုံလောက်တဲ့အခါမှာလည်း လက်သည်းတွေ ဝါပါတယ်။
လက်သည်းအတိုပဲထားထား၊ အရှည်ပဲထားထား ဝါကျင့်ကျင့်အရောင်သမ်းနေတဲ့ လက်သည်းတွေက သင့်လက်ကလေးတွေရဲ့အလှကို ဖျက်ဆီးနေတာပါပဲ။ လက်သည်းဝါဝါကြီးတွေကိုမကြိုက်လို့ လက်သည်းနီကို အမြဲတမ်းဆိုးနေရတာလည်း မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုတောင်ဆိုးလာစေပါတယ်။ လက်သည်းခွံတွေ အရောင်မညစ်ချင်ရင်တော့ လက်သည်းဆိုးဆေးမဆိုးမီ base coat အကြည်ကို ဆိုးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဘာကြောင့် လက်သည်းတွေဝါရတာလဲဆိုရင် စောနကပြောသလို လက်သည်းဆိုးဆေးကြောင့်က များပါတယ်။ အရောင်ရင့်တွေဆိုးလေလေ လက်သည်းပိုဝါလေလေပါပဲ။ ဆေးလိပ်သောက်ရင်လည်း လက်သည်းတွေဝါတတ်ပါသေးတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးတော့လည်း လက်သည်းအရောင်တွေ ညစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မှိုစွဲတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းအကြိတ် (သွိုင်းရွိုက်)၊ အသည်း၊ အဆုတ်တို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်လည်း လက်သည်းတွေ ဝါနိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ် မလုံလောက်တဲ့အခါမှာလည်း လက်သည်းတွေ ဝါပါတယ်။
- သံပရာခြမ်းလေးနဲ့ လက်သည်းကို နေ့စဉ်ပွတ်တိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်တော့ တိုက်ပေးရပါမယ်။ ဒီနည်းက အလွယ်ဆုံးပါ။ ၅ ရက်လောက်ဆို ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သံပရာ/သံပရိုရည်ထဲကို လက်သည်းလေးတွေ ၁၀ မိနစ်လောက် နှစ်ထားပေးလို့လည်းရတယ်။
- သွားတိုက်ဆေးနဲ့လည်း လက်သည်းဖြူအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ သွားကိုဖြူဖွေးစေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးတွေနဲ့ လက်သည်းကိုလည်း သွားတိုက်သလို ပွတ်တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ယာယီစွန်းထင်းနေတာတွေအတွက်ပဲ သုံးရမှာနော်။
- Hydrogen peroxide (ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်) ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲကို ရောစပ်ပြီး ဂွမ်းလေးနဲ့တို့ကာ လက်သည်းကိုပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်က ချွတ်ဆေးပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၃ မိနစ်လောက်ပဲ လက်သည်းပေါ်မှာ ထားပေးပြီးရင် ပြန်ဆေးရပါမယ်။ နှစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး တစ်လခွဲအကြာမှ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။
Source : She Know